Usuku lokuphila kahle lusikhumbuza ngokuphila okuphelele - Bayede News
by nguDkt uRosie Mgqibisa
nguDkt uRosie Mgqibisa
UDkt uMngqibisa ungudokotela wezempilo.
NgoLwesithathu ziyisi-7 kuMbasa umhlaba wonke ubugubha usuku lwezempilo olubizwa ngokuthi iWorld Health Day ngaphansi kwesiqubulo salo nyaka esithi “Building a Fairer, Healthier World”.
Lolu suku luwumkhankaso wokuqwashisa ngezempilo oselubungazwe minyaka yonke lwesekwa iWorld Health Organization (WHO) kusukela ngowe-1950.
Ngalolu suku kuhloswe ukuveza ukubaluleka kwempilo. Asiqale ngokuchaza impilo.
Impilo akusikho nje ukungabikho kwesifo kepha isimo sokuba sesimweni esihle ngokomzimba, ngokwengqondo nangokwenhlalo.
Izigaba ezinhlanu ezibalulelike zempilo yomuntu umzimba, ingqondo, inhlalo, inkolo nobuhlakani. Uma besingathatha umuntu njengophile kahle bekuyosho ukuthi zonke lezi zingxenye zempilo zikahle hhayi umzimba kuphela. Zonke izingxenye zempilo yakho zethembele empilweni yakho enhle ukuze zenze kahle.
Impilo ibonakala ngezimo eziningi ezahlukene njengobubha, ukungahleleleki izindawo zokuhlala nendawo ephephile, ukweswelakala kwemfundo, ukungalingani ngokobulili, amanzi nomoya okuhlanzekile, ukuvikeleka kokudla nokuhlinzekwa ngokwezempilo.
Lokhu kuholela okanye kunomthelela ezifweni kwesinye isikhathi ezingagwemeka nasekufeni singakafiki isikhathi.
Ukufinyelela esimweni esihle sempilo kuwuhambo olunezinto eziningi futhi oludinga abaholi ukuba:
baqinisekise ukuthi wonke umuntu usesimweni sokuhlala nokusebenza esivumelanayo nempilo enhle
babheke ukungalingani ngokwezempilo
ukuqinisekisa ukuthi bonke abantu bayahlinzekwa ngezempilo eziseqophelweni eliphezulu uma bezidinga.
Njengemiphakathi kufanele sazi ukuthi impilo iyilungelo. Lokhu kusho ukuthi wonke umuntu ophilayo unelungelo lempilo engcono nokuthola ezempilo.
UHulumeni waseNingizimu Afrika usuzibophezele empilweni enhle nasekuphathekeni kahle kwazo zonke izakhamuzi.
Impilo enhle ilungelo lesintu elibalulekile futhi ineqhaza elikhulu ekuthuthukisweni kwesintu.
Umbono kaHulumeni wezi-2020/2021 ukuzuza “impilo ende nenhle yazo zonke izakhamuzi zaseNingizimu Afrika” futhi usunike uMnyango Wezempilo umthwalo wokuthi ukuqinisekise lokhu ngokuthi wehlise izifo nokufa nokwandisa isikhathi esiphilwa abantu.
ISigaba 27 soMthethosisekelo siyakugcizelela lokhu ngokuthi sithi maqondana nezempilo, ukudla, amanzi nokuvikeleka emphakathini: (1) Wonke umuntu unelungelo lokuthola:
Ezempilo, okubalwa nezempilo eziqondene nenzalo yomuntu
Ukudla namanzi okwanele
Ukuvikeleka ngokwenhlalo, okufaka, uma abantu bengakwazi ukuzondla bona nabathembele kubona nokuthola usizo olufanele.
Njengengxenye yezinhloso zikaHulumeni zentuthuko emileyo, uHulumeni waseNingizimu Afrika uphinde wazibophezela ekuqinisekiseni ukuthi impilo ekahle nokugqugquzela ukuphatheka kahle kwabo bonke abadala nabancane ngokuqeda ubhubhane ingculaza, ufuba, umalaleveva nezifo ezinganakiwe, ukunciphisa ukufa ngesikhathi sokubeletha.
Ukhuvethe lwenze kwabanzima ukuzuza impilo enhle yabantu bonke ngowezi-2030 kuya phambili njengoba lugadle kwazwela emiphakathini ebivele ingavikelekile futhi enamathuba amancane okuthola ezempilo ezingcono.
Lokhu kuphinde kwaveza ukungafani okukhulu ngokwezempilo kwemiphakathi. Kunezinhlangano eziningi ezibambe iqhaza ezinhlelweni zokuhlinzeka wonke umuntu ezempilo ngendlela efanele.
Isibonelo, inhlangano ebizwa nge-One Drop, yenza isiqiniseko sokutholakala kwamanzi aphephile nokuthuthwa kwendle emiphakathini eminingi engavikelekile emhlabeni jikelele.
Ukuthola amanzi aphephile nokuthuthwa kwendle kubalulekile ekugcineni impilo enhle.
IWHO isaqhubeka ixhumana namazwe incenga abaholi ukuba basebenzisane nemiphakathi ethintekayo kanjalo nabantu ukubhekana nomsuka wokungalingani nokusebenzisa izisombululo emkhakheni wezempilo nangale kwawo, ukwandiswa kokutshalwa kwemali kwezempilo, ukuqinisekisa ukusatshalaliswa kwemigomo ngokulinganayo, ukubhekwa kwezifo zisaqala, ukuhlolwa nokwelashwa.
Uyini umthwalo womuntu ngamunye?
Okokuqala, kumele ukwamukele ukuthi ukuphila kahle kufanele kube yingxenye yendlela ophila ngayo ukwenza lokhu ngokwenza okulungele umzimba wakho.
Ukuphila impilo ehlanzekile kungasiza ukunqanda izifo ezingamahlalakhona.
Izindlela zokuzinakekela ziyefana nalezo zokuvika izifo. Kufanele sigxile endleleni yokuziphatha egqugquzela impilo ngoba lokhu kungagwema izifo.
Ukuzivocavova kunemiphumela emihle ngaphezu kokufuna ukwehlisa isisindo somzimba kodwa kuwukhiye ekwehliseni ukhwantalala olungaba nobungozi empilweni yakho njengamakhemikhali. Ingqondo ekhathazekile ingaholela ekutheni umzimba ungasebenzi kahle.
Gwema noma yehlisa izinto ezaziwayo ngobungozi empilweni ezifana nokubhema, ukungadli ngendlela, ukuphuza utshwala ngokweqile nokunye.
nguDkt uRosie Mgqibisa Apr 9, 2021